Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya "Somaliya Waa Inaan Mid Noqonaa Si Aanu Uga Baxno Dekad La,aanta” | Awdalmedia.com
Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya "Somaliya Waa Inaan Mid Noqonaa Si Aanu Uga Baxno Dekad La,aanta”
Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya Dr. Abiy Ahmed Ali oo shalay booqasho saacado qaadatay ku yimid magaalada Muqdisho, isla markaana heshiis ku saabsan maalgashiga afar dekedood ay wada galeen Madaxweyne Farmaajo ayaa faah faahin ka bixiyay ujeedka safarkiisa iyo heshiiska.
Dr. Abiy Ahmed Ali ayaa markii uu dib ugu laabtay magaalada Addis Ababa la hadlay Telefishinka Qaranka Itoobiya EBC, ayuu ku yeeshay in Madaxda Soomaaliya isku afgarteen inay hal dal noqdaan.
“Hal dal oo mid ah ayaan noqonaynaa annaguna dekad la’anta ayaan ka baxeynaa iyaguna dakadahooda hal markab uu ka muuqdo ayay dhaqaale ka helayaan. Weligeen inaan Siyaad Barre iyo Mengistu wixii dhex maray ka sheekeyno ma aha”ayuu yiri Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya oo ku hadlayay afka Amxaariga.
Hadalka Ra’iisul Wasaaraha ayaa durba abuuray xasaasiyad iyo doodo saacadihii la soo dhaafay qabsatay baraha bulshada, waxaana weli Madaxda dowladda Soomaaliya ka hadlin heshiiskaas oo aanay shacabka si toos ugu faah faahin, marka laga reebo shirka jaraa’id ee Madaxweyne Farmaajo ee ahaa luqada English-ka.
Safarka Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya ee Muqdisho ayaa ku soo aaday, maalin kaddib markii Dhaxalsugaha Imaaraadka Carabta Maxamed Bin Zayed uu booqasho ku tagay Addis Ababa, iyadoo Imaaraadka Carabta uu Itoobiya la galay heshiis is faham oo ku kacaya illaa saddex bilyan oo dollar oo Hal Bilyan ka mid ah la dhigay Bankiga Dhexe Itoobiya, kaasoo ah maalgashi iyo horumarin